Christiane Taubira na-achọ nkwụghachi ụgwọ maka ngalaba nke esenidụt, ndị mbụ gbara ohu - Afrikhepri Fondation
Tuesday, Jenụwarị 19, 2021
Eọkammụta, ethnologist, onye isi oche ndị isi nke njikọ Caribbean na onye otu nzuko omeiwu, Christiane Taubira tụpụtara na 1999 na ịgba ohu na ịzụ ahịa tozuru oke dị ka mpụ megide ụmụ mmadụ. Arịrịọ a gosipụtara ọkwa dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke mmekọrịta dị n'etiti France na obodo ndị ọ chịburu, afọ 150 ka a kwụsịchara ịgba ohu. Christiane Taubira rịọrọ ka a tụlee ohere nke ịkwụ ụgwọ ihe maka ngalaba esenidụt (DOM), ndị mbụ metụtara ịgba ohu na ịzụ ahịa. Ndị kọmitii iwu jụrụ arịrịọ a, mana ndị nnọchi anya nọ ya nabatara ụgwọ ahụ.
“[….] Isi okwu a anyị tụlere abụghị ihe mmụta dị jụụ. N'ihi na ọ ka ga-agafe oge tupu udo na ịdị nwayọ abịa ịbelata ọnya miri emi nke na-agba ume n'echeghị echiche, n'ihi na ọ nwere ike ịbụ mkparị ịnụ akụkụ ụfọdụ nke ihe menu ahụ kọwara. ọdachi dị egwu na ogologo n'ihi na akụkọ ihe mere eme abụghị ezigbo sayensị […] Nkwupụta a abụghị akụkọ ihe mere eme […]
Ọ bụghị ihe edemede nke egwu egwu, na-ebu ngwaahịa nke agbụ ígwè, ígwè, nkwonkwo, nkpuchi, nchịkọta na ụtarị nke e mepụtara ma zuo oke iji mebie. Ọ bụghịkwa ịkatọ, n'ihi na ikpe ọmụma abụghị ihe nketa na n'ihi na ebumnuche anyị abụghị ịbọ ọbọ. Ọ bụghị arịrịọ maka nchegharị n'ihi na ọ dịghị onye ga-enwe echiche ịjụ maka mmerụ miri emi na obi ụfụ maka ọchịchị ụwa, bụ ndị ụkpụrụ nhazi ya na-eme ka ịjụ ikpe na-ezighị ezi. Ọ bụghị mmemme nke cathart (nke na-eme ka ihe si na ya pụta, nke na-emegharị ahụ ma ọ bụ na-emegbu mmadụ) n'ihi na mkparịta ụka ndị na-akpachi anya na-eme ka obi sie anyị ike. Ọ bụghịkwa ọrụ okwukwe, n'ihi na anyị ka na-eme ka ìgwè mmadụ anyị na-ebe ákwá. Ma anyị ga-akọwa mpụ ahụ, ọrụ nchefu, nkwụsị, ma kwuo ihe mere ị ga - eji aha na ọnọdụ nye ihe arụ a. Site na mmalite, ụlọ ọrụ ahụ akara site na ferocity. Afọ iri na ise zuru ezu iji kpochapụ ha na Haiti ndị mbụ bi na ya, ndị Amerindia. Ọ bụ ezie na e nwere 11 nde na America na 1519, ha bụ naanị 2,5 nde na njedebe nke narị afọ nke iri na isii. Akpọrọ ya ngwa ngwa: ọ bụ akụkụ nke ọrụ mgbasa ozi, nke iji zọpụta ndị mmadụ na-adịghị anwụ anwụ, chọrọ iji mesighachi anya mgbapụta nke ụfọdụ. Akpọrọ na Cham kwuru na ọ bụ ọnụ. (na-ezo aka na nwa nke abụọ nke Noa na ụmụ ya, ndị nna nna dịka Akwụkwọ Nsọ nke ndị ojii nke Africa bụ ndị a bụrụ ọnụ) [...] Ịzụ ahịa na ịgba ohu bụ ihe ike. Ọnụ ọgụgụ ndị na-ekwu na ichikota ha bụ oke obi ọjọọ.
Na 1978, enyocha zuru ezu banyere ahia ohu na ịgba ohu nke France rụrụ. Ọ dị ka ikike ohu nke atọ nke Europe. Ya mere, ọ na-azụ ahịa, azụmahịa a, ahia a, okporo ụzọ a nke nanị ya bụ ọlaedo, ọlaọcha, ngwa nri. Emeela ya mgbe ndị ọzọ, tinyere ndị ọzọ, na ịgba ohu nke na-eme ka nwoke ghọọ onye a dọtara n'agha, na-eme ka ọ bụrụ anụ anụ na ibu nke onye ọzọ.
Na nwa koodu (n'okpuru ọchịchị nke Louis nke Iri na Anọ, Usoro eti iwu na 1685, chịrị ọnọdụ nke ịbụ ohu na French chịrị na ndụ ndị nwa ohu na isuo. Ọ na-akwado (iwu ratification na-eme ka dị irè (ihe na-egosi ) bụ omume nke zita ahia), nke nọrọ n'okpuru French iwu nke fọrọ nke nta ka narị afọ abụọ, kwuru na onye ahụ bụ ohu a mpempe ngwá ụlọ na tọhapụrụ ohu nwere a erikwa akwanyere ya bụbu nna ya ukwu, di ha nwụrụ na ụmụ . ahịa ohu ahụ were narị afọ anọ, ebe mbụ ụgbọ mmiri ahụ ruru Cape Bojador na 1416, na Rio de Oro (Southern akụkụ nke Sahara). Ọ-adịghị anya wee doo anya na Native America a na-decimated obi ọjọọ site ịgba ohu, ọjọọ, ọrụ mmanye, ọrịa, na-aba n'anya, agha resistor.The Dominican nchụàjà Bartolomé de Las Casas, onye chọrọ ka na-echebe, na-atụ aro oke ịtụbata A. frican, ewere ihe siri ike.
Iri na ise iri atọ nde mmadụ, dị ka dị iche iche nke akụkọ ihe mere eme, ndị inyom, ụmụaka, ndị ikom, ahụhụ ahia mgbere na ohu na-eleghị anya, na-ekwu, ọgu atọ na iri nde, ma ọ bụrụ na anyị na-jide atụmatụ nke na-ekwu na n'ihi na otu ohu rutere n'America, mmadụ anọ ma ọ bụ ise lara n'iyi, na-aga n'ụsọ oké osimiri, na ụlọ ohu nke Goree, Ouidah, Zanzibar na mgbe ha na-agafe.
Azụmahịa a na-enwe n'akụkụ ụzọ atọ na nzuzo ma ọ bụ maka ọha maka otu ọdịmma ma ọ bụ maka ihe gọọmentị. A haziri usoro ohu ahụ n'ubi ala (nke ziri ezi nke bụ ngalaba ma ọ bụ nke mpaghara ọha na-aga) nwere ọganihu ma ọ bụ nwee ọganihu karịa nke ndị ụkọchukwu na ndị ọbịa. Ruo ogologo oge, ruo na 1716, ụlọ ọrụ ndị nwe ụlọ na-achịkwa atụmatụ nkeonwe (ọkachasị Compagnie des indes occidentales, nke Colbert mepụtara na 1664, mgbe ahụ Compagnie du Sénégal na 1674. Mana mmepe nke akụ na ụba osisi, Akwụkwọ ozi patent (asambodo mmiri nke ọnọdụ ịdị ọcha nke ụgbọ mmiri na-apụ apụ) nke Jenụwarị 16, 1716 nyere ikike ọdụ ụgbọ mmiri nke Rouen, Saint-Malo, La Rochelle, Nantes na Bordeaux iji na-azụ ahịa nke ohu ohu ahụ, na-emegide kilogram iri abụọ kwa isi nke ndị isi ojii webatara n'agwaetiti ndị ahụ na nnwere onwe site na ụtụ mbubata […] Ime ihe ike a na arụrụala a kọwara nke ọma, maka akụkụ buru ibu, ịgbachi nkịtị nke na-abịaru ma na-eduga na nkwekọrịta nke ike ọha na eze, bụ ndị chọrọ ime ka ndị mmadụ chefuo na ụmụ ụmụ ndị ohu, ndị chọrọ ichefu. Ma anyị maara nkekọrịta ọrụ. [ Anyị nọ ebe a ekwuru m ihe ahia ohu na ịgba ohu bụ, icheta na enlightenment kara akara site nnupụisi megide ọchịchị nke Chọọchị, site na ịchọrọ ikike mmadụ, site n'ọchịchọ siri ike maka ọchịchị onye kwuo uche ya , ma chetakwa na, n'oge a, akụ na ụba ihe ọkụkụ na-eme nke ọma na azụmaahịa atọ ahụ maara oke egwu ya n'etiti 1783 na 1791. Anyị nọ ebe a ịsị na ọ bụrụ na Africa araparawo na mba mmepe bụkwa n'ihi na e kewapụrụ ya ụmụ nwoke na ụmụ ya nwaanyị; na ọ bụrụ na Martinique na Guadeloupe na-adabere na akụnụba shuga, na-adabere na ahịa echedoro, ọ bụrụ na Guyana nwere nnukwu nsogbu n'ịchịkwa akụ ya (ọkachasị osisi na ọla edo), ọ bụrụ na a manyere Reunion. sozụ ahịa dị anya site na ndị agbata obi ya bụ ihe si na njedebe nke colonial; na ọ bụrụ na nkesa ala adịghịkwa nha nhata, ọ bụ ihe a rụpụtara sitere na ọchịchị ụlọ.
Anyi no ebe a ikwu na ahia ohu na ohu bu ma buru mmebi iwu megide mmadu; […] Ihe odide a na iwu, okwu a siri ike, nke na-enweghị mgbagha, okwu a na-adịgide adịgide bụ okwu nkwụghachi ihe atụ, nke mbụ na enweghị obi abụọ kachasị ike. Mana ọ na-ebute ịkwụghachi ndọrọ ndọrọ ọchịchị site na ichebara ntọala na-enweghị aha nke obodo ndị mba ofesi jikọtara na ịgba ohu, ọkachasị ịkwụ ụgwọ maka ndị ọbịa gbasoro mkpochapụ. Ọ na-egosipụtakwa mmezi omume nke na-atụnye n'ọkụ zuru oke nke ọjụjụ nke ndị guzogidere n'Africa, site na ndị na-agagharị agagharị (Ndị ohu na-agba ọsọ) bụ ndị duru ụdị mmegide na mpaghara niile, site n'aka ndị obodo. na ndị ọrụ France, site na ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na omume nke ndị ọkà ihe ọmụma na mkpochapụ.
Ọ (ihe edere na iwu a) na-eche na nkwụghachi ụgwọ a jikọtara mbọ a gbara iji kpochapụ ịkpa ókè agbụrụ, ịmata mgbọrọgwụ nke esemokwu agbụrụ, iji chee ikpe na-ezighị ezi echepụtara. Ọ na-eche na mmezi ọdịbendị, ọkachasị site na nwughari nke ebe nchekwa. nọ na ndụ na ndụ ahụ dị na agba, na ọdịbendị na atụmatụ, mgbe ha jikọtara ọnụ, na-enwekwu ndụ ma na-enwukwa ọkụ. […] Léon Gontran Damas (1912-1978), onye na-ede uri Guyanese na onye osote onye na-elekọta mmadụ maka Guyana, Co-guzobere ajọ echiche na Aimé Césaire na Léopold Sédar Senghor: tiri mkpu iwe ya: "Enwere m ike ike iti mkpu ruo mgbe ebighị ebi megide ndị gbara m gburugburu na ndị na-egbochi m ruo mgbe ebighi ebi ịbụ mmadụ ”.
Okwu na Mgbakọ Mba nke 18 February 1999
Olu ụmụ nwanyị - Nnukwu okwu ndị a kara akara n’akụkọ ihe mere eme
4 ọhụrụ site na .21,50 XNUMX
3 ejiri site na 36,36
Zụta € 21,50
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 19, 2021 11:38
E wezụga agha nke ogwe aka, agha na-ebibi mkpụrụ obi
Lelee Manhattan Lockdown (2019)
Ihe omuma banyere ime onwe ya - Paramahansa Yogananda (Audio)
Nwoke bu nchebara echiche ya - James Allen (Audio)